जसपाको एक वर्ष : ओलीविरुद्ध शुरु भएको मोर्चावन्दी ओलीकै कारण धरापमा!
वीरेन्द्र ओली शुक्रबार, वैशाख १०, २०७८, २३:१५
काठमाडौं- तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीबीच एकता भएको एक वर्ष पुग्यो। तर, दुई पार्टीको एकताबाट बनेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) एकताको एक वर्ष पुग्दै गर्दा यो पार्टी निकै कष्टकर समयबाट गुज्रिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चावन्दी हुँदै एक भएको जसपा ठीक एक वर्षपछि उनै ओलीका कारण विभाजनउन्मुख छ। ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने वा नजाने विषयलाई लिएर अहिले जसपाका नेताहरु दुई धारमा विभाजित छन्।
जसपाभित्रको तत्कालीन राजपाका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो लगायतका नेताहरु ओली नेतृत्वको सरकारसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्न सकिने 'मूड'मा पुगेका छन्। ओली अहिले संकटमा परेको र उनबाट आफ्ना माग सम्बोधन गराउन सकिने भन्दै उनीहरु निरन्तर छलफलमा छन्। आफ्ना माग पूरा भए समर्थन मात्रै गर्ने वा सरकारमा जाने विषयलाई दोस्रो चरणमा निर्णय गर्ने भन्दै पर्खेर बसेका छन्।
तर, तत्कालीन समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अशोक राईलगायतका नेताहरु ओली नेतृत्वको सरकारसँग संवाद नै गर्न नहुने पक्षमा निरन्तर लागिरहेका छन्। गत पुस ५ गतेपछि ओलीको ‘प्रतिगमन’विरुद्ध आन्दोलनमा सहभागी भएकाले नैतिक रुपमा उनीसँग छलफल गर्न नमिल्ने भन्दै उनीहरु टाढै बसेका छन्। ओलीले आफ्ना माग पूरा नगर्ने भन्दै संयुक्त सरकार बनाउन पहल गर्नुपर्ने उनीहरुको मत छ।
ओलीविरुद्ध मोर्चावन्दी गर्दै एक भएको जसपा फेरि ओली नेतृत्वको सरकारमा जाने वा नजाने विषयलाई लिएर विभाजनको संघारमा पुगेको छ। र, विभाजनको संकेत लुम्बिनी प्रदेश सभामा देखिइसकेको छ।
यसरी भएको थियो एकता
अघिल्लो वर्ष, २०७७ वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले अनपेक्षित रुपमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। तत्कालीन नेकपामा बढ्दै गएको अन्तरसंघर्ष पार लगाउन ओलीले अध्यादेश ल्याएपनि उनी सफल भएनन्। व्यापक विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता लिइयो।
तर, अध्यादेश फिर्ता नलिँदै ओलीले तत्कालीन राजपा र समाजवादीभित्रको एउटा समूहसँग सघन छलफल बनाइसकेका थिए। बरु त्यो अध्यादेश ल्याउनुको एउटा कारण उनीहरुलाई फुटाएर आफूनजिक तान्नु पनि थियो। र ‘सांसद अपहरण’ काण्डसमेत भएपछि राजपा र समाजवादीको एकता भयो। अघिल्लो वर्ष वैशाख १० गते राति ११ बजे दुई पार्टीले एकता घोषणा गरे।
जसपामा एक वर्षमा केन्द्रमा पदाधिकारी, कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समिति गठन भएपनि भावनात्मक रुपमा एक हुन सकेको छैन। प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र जनवर्गीय संगठनको एकताले पूर्णता पाएको छैन। केन्द्रमा पार्टी एक भएपनि संसदीय दल छुट्टाछुट्टै रुपमा अभ्यास गरिरहेका छन्। सातवटै प्रदेशमा फरक-फरक संसदीय दलको रुपमा अभ्यास गरिरहेका छन्। जसपा एक वर्षमा संगठित भई अघि बढ्ने भन्दा पनि विवाद र अन्तरसंघर्षले गुजुल्टिएको छ।
यसको पछिल्लो उदाहरण लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका सांसदहरु त्यसको केहीबेरमा पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुनुलाई लिन सकिन्छ।
तर, अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लुम्बिनी प्रदेशको जसपा विवाद नमुना भएको टिप्पणी गरे। पार्टी निर्णयविरुद्ध जाने लुम्बनी प्रदेशका चार सांसदलाई कारबाही गरिने उनको चेतावनी छ। यद्यपि, पार्टी केन्द्रमा देखिएको विवादमा भने नेताहरु बसेर समाधान खोजिने यादव बताउँछन्।
‘नेपालको राजनीति तरल अवस्थामा छ। पार्टीले संस्थागत रुपले काम गर्न सकेका छैनन्। जातिवाद, नातावाद, कृपावाद, आफन्तवाद र आसेपासेको चंगुलबाट मुक्त हुन सकेको छैन’, यादवले भने, ‘सम्पूर्ण जनताको केन्द्रविन्दुमा हुने राजनीति संस्थागत रुपमा अभ्यास गर्ने र एक अर्कासँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने साझा भावनाको विकास गर्नु पर्नेछ। तब मात्र सबैले सम्मान गर्ने र सबैलाई समेट्ने राजनीति विकास हुनेछ।’
फोरम हुँदै समाजवादी दल यसरी स्थापना भयो
पुष्पलाल श्रेष्ठ समूहबाट राजनीतिमा आएका यादव २०४७ सालमा माले–मार्क्सवादी एकतापछि एमालेमा सक्रिय भए। उनी एमालेबाट २०४८ को संसदीय निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ मा कांग्रेस नेता विजय गच्छदारबाट पराजित भए। यादवले २०५४ सालमा मधेशी जनअधिकार फोरम नामक गैरसरकारी संस्था स्थापना गरे। मधेशका सवाललाई लिएर वौद्धिक छलफल र बहस गर्न भन्दै फोरम स्थापना गरियो। फोरमले देशका विभिन्न ठाउँमा गई बहस छलफल समेत गरेको थियो। मधेश आन्दोलनसँगै फोरमलाई यादवले पार्टीका रुपमा दर्ता गरेर सक्रिय बनाए।
फोरमले पार्टीकै हैसियतमा दोस्रो जनआन्दोलनमा सशक्त सहभागिता समेत जनायो। २ माघ २०६३ मा अन्तरिम संविधान घोषणा गरेपछि आफूहरुलाई रंगभेद गरिएको भन्दै त्यसैदिन माइतीघर मण्डलमा अन्तरिम संविधान जलाएर यादवको नेतृत्वमा आन्दोलन सुरु गरियो। संविधान जलाएर आन्दोलन गरेको भन्दै प्रहरीले उपेन्द्र यादवसहित २८ जना नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्‍यो। मधेशमा आन्दोलनले ठूलो रुप लियो। कांग्रेस, एमाले, माओवादी छोडेर केही नेताहरुले नयाँ दल गठन गर्दै मधेश केन्द्रित बन्न थाले। लामो मधेश आन्दोलनबाट १३ भदौ २०६४ मा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मार्चाबीच २२ बुँदे सहमति भयो।
सहमतिपछि संविधानसभा निर्वाचनमा उनीहरुले सहभागिता जनाउन बाटो खुल्यो। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम पहिलो संविधान सभामा निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित पहिलो दलको रुपमा स्थापित भयो तर, २०७० सालसम्म आइपुग्दा चार टुक्रामा विभाजन भयो। ३२ जेठ २०७२ आशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनाअधिकार फोरमबीच एकता भएपछि बलियो शक्ति हुन थाल्यो। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति र उपेन्द्र नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमबीच २१ वैशाख २०७६ मा एकता घोषणा समाजवादी पार्टीले तराई, पहाड र हिमाललाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा आकार लिएको थियो।
यसरी स्थापना भयो सद्भावना हुँदै राजपा
लामो समय कांग्रेसको राजनीति गर्दै आएका गजेन्द्रनारायण सिंहसहितले २०४० सालमा नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरे। मधेशी समुदायको भाषा, संस्कृति, संघीयता, समावेशीता, नागरिकता लगायत समग्र पहिचानका लागि परिषदलाई फोरम बनाई बहस पैरवी गर्न थालिएको थियो। ‘मधेशी, पहाडी र हिमाली सबै समुदायमा सद्भाव, मेलमिलाप एकता र मानवता भन्ने मान्यताका साथ सद्भावना परिषद दर्ता गरियो’, जसपा नेता राजेन्द्र महतो भन्छन्, ‘परिषदकै नामबाट तराई मात्र होइन काठमाडौंलगायत देशका अधिकांश ठाउँमा मधेशी समुदायमाथि भइरहेको विभेद्का सम्बन्धमा बहस, छलफल र पैरवी गर्न थालियो।’
२०४६ सालको जनआन्दोलनमा सद्भावना परिषद्ले प्रत्यक्ष रुपमा सहभागिता जनायो। समग्र मधेशको मुद्दालाई लिएर सिंहले ३ वैशाख २०४७ मा सद्भावना पार्टीको रुपमा दर्ता गरे। सद्भावना पार्टी २०४८ सालको निर्वाचनमा भाग लिई ६ सिट ल्याएपनि सरकारमा सहभागी भएन। २०५१ सालको निर्वाचनमा ३ सिट मात्रै ल्याएपनि २०५४ सालमा सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारमा गजेन्द्रनारायण सिंह वाणिज्य मन्त्री भए।
सद्भावना पार्टीमा प्रवेश गर्ने, छोड्ने क्रम सामान्य भएपनि १० माघ २०५८ मा सिंहको निधन भएपछि पार्टी तीन टुक्रामा विभाजित भयो। २०६४ सालमा राजेन्द्र महतो र लक्ष्मणलाल कर्ण नेतृत्वको सद्भावना एक भएपछि पार्टी बलियो हुँदै गयो।
७ वैशाख २०७४ तराई मधेश केन्द्रित विभिन्न ६ दलले एकता गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) गठन भयो। जसमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको तमलोपा, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना, अनिल झाको सद्भावना, सरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी, राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक र महेन्द्रराय यादव नेतृत्वको तराई मधेश सद्भावना पार्टी एक भएका थिए।
कसले जुटाउँछ बहुमत ? यस्तो छ सम्भावित अंकगणित
नेपालपक्षको ‘मूभ’सँगै यसरी जोगियो जसपा
सफल होला त एमाले मिलाउने दोस्रो तहका नेताको सक्रियता ?